बाबुरामले गरे प्रचण्डको कडा बिरोध , प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर दिन काट्ने मात्रै हो – ZoomNP
बाबुरामले गरे प्रचण्डको कडा बिरोध , प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर दिन काट्ने मात्रै हो प्रकाशित मिति: बिहिवार, कार्तिक १८, २०७३ समय - १८:४४:५१ कात्तीक १८ नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टीका संयोजक बाबुराम भटट्राईलेप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दिन काट्ने बाहेक केही काम गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । उनका अनुसार प्रचण्डले संविधान संशोधन लगायत मुलुकका वर्तमान समस्याको हल समेत गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले संयोजक बाबुरामसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेपाल-भारतवीचको सम्बन्ध अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
हामी दुईदेशबीचको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा हामीले एकचोटि बसेर नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु । २१ औं शताब्दीमा अहिले विश्व र क्षेत्रिय परिस्थिति धेरै बदलिसकेको छ । नेपाल र भारत त यति नजिकका मित्र छन् । हामी छिमेकीको मित्रतालाई पूनपरिभाषित गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति दुवै देश एक ठाउँमा बसेर सम्रग मुल्यांकन गरेर अगाडि जानुपर्छ ।
उसो भए आज जसरी यी दुईबीचको सम्बन्ध अघि बढेको छ, यसले दुवै देशलाई हित गर्दैन भन्ने तपाईको भनाई हो ?
हित नै गर्दैन त म भन्दिन । तर अहिलेको आवश्यकत्ता यतिको सम्बन्धले पुग्दैन् । विश्व आज तिव्र गतिमा बढिरहेको छ । क्षेत्रिय गतिविधि आज बढिरहेको छ । भारतको पनि विकासको गति आवश्यकत्ता अनुसार भएको छैन् । हामी त विकासको कुरामा पिँधमा छौं । त्यसैले हामी दुवै हाम्रोवीचको सम्बन्धलाई कसरी पूर्नपरिभाषित गरेर जानपर्छ भन्नेमा सोच्नुपर्छ।
तपाईसँग यसको लागि सूत्र छ त ?
छ । अवश्य पनि । त्यसको निम्ति विकास र समृद्धिलाई आधार मानेर सम्बन्धलाई पूर्नपरिभाषित गर्नुपर्छ ।
भारतले त नेपालको राजनीतिक कुरामा पनि विशेष दख्खल राख्छ भन्ने जनगुनासो पनि त छ नि ?
द्धिपक्षीय सम्बन्ध पूर्नपरिभाषित गर्ने भनेको सबै पक्षहरुलाई पूर्नपरिभाषित गर्ने कुरा हो नि । जस्तो राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृति, धार्मिक लगायत सबै विषयहरु । तर त्यसको केन्द्रमा आर्थिक विकास हुनुपर्छ । आर्थिक विकासलाई मद्दत पुग्नेगरि हामीले राजनीति, सामाजिक कुरालाईपनि अघि बढाउन सक्छौं ।
उसो भए अब पहिलो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकास नै हो ?
हो, पहिलो प्राथमिकता भनेको नै आर्थिक विकास हो । त्यसलाई सुहाउनेगरि राजनीति, सामाजिक, साँस्कृतिक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ ।
नेपालका दलहरुवीच नै एकता नभएपछि भारतले किन नेपाललाई सहयोग गर्ने त भन्ने प्रश्नपनि त छ नि ?
हो, सही हो । जबसम्म नेपालीहरु आपसमा झगडा गर्छन्, त्यतिवेला छिमेकीले खेल्यो भनेर दोष दिनुहुँदैन् ।
उसो भए नेपालको संविधानमा भारतले चलखेल गरेकै हो त ?
हामीले आपसमा सहमति गर्नुपर्दथ्यो । पहिलो संविधानसभामा जे निर्णय गरिएको थियो । त्यस अनुरुप संविधान जारी नुहुनु हाम्रो आफ्नै त्रुटि हो । त्यो हाम्रो आफ्नै गल्ति हो । त्यसमा छिमेकीले थोरै खेलेकै हो । तर मुख्य त्रुटि गर्ने दोषी त हामी नै हो ।
तर अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भारतले भनिरहेको छ नि ?
हामीले भनेको हो । मैले भनेको हुँ । बाबुराम भट्टराईले सम्वाद समितिको सभापतिको नाताले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै राज्य पूर्नसंरचना आयोगको भावना अनुसार नै संविधान बनाऔं भनेको थिएँ । त्यसबाट पछि हट्न हुँदैन भनेको थिएँ । तर उनीहरुले मानेनन । त्यसैले आज संविधान जारी भएको एक वर्ष वित्दा समेत संविधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भारतले त्यसपछिमात्रै खेलेको हो ।
उसो भए हाम्रो देशमा दलहरुवीच सहमति हुन्छ त ?
हुन्छ । बनाउनुपर्छ । यसको लागि म त प्रयत्न गरिरहेको छु । हामीले सहमति कायम गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संविधान संशोधन गर्दा शासकीय स्वरुपमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यसको लागि ठूला पार्टीहरु तयार छन् त ?
उहाँहरु त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ । यदि हुनुभएन भने देशको दुर्गतिको जिम्मेवारी उहाँहरुले लिनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्वको लागिपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुुनुपर्छ ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका नेपाल भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँको यो भ्रमणलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । नेपालीहरुले हाम्रो अतिथिलाई राम्रोसँग सत्कार गर्नुपर्छ । हामीले अहिले गरिरहेका छौं । उहाँको भ्रमणले गत वर्ष नेपाल र भारतवीचको सम्बन्धमा जुन किसिमको तित्तता रह्यो, त्यसलाई कम गर्नको लागि सही ढंगले अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
मुखर्जीको यो भ्रमणले राजनीतिक मुद्दालाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
होईन । विल्कुलै होईन । उहाँ सेरोमोनियल राष्ट्रपति उहाँले राजनीतिक विषयमा हात हाल्नुहुँदैन । हाम्रो आन्तरिक विषयमा विदेशीले हात हाल्नुपनि हुँदैन् । सम्बन्धलाई मित्रतामा ल्याउने काम उहाँको भ्रमणले गर्छ ।
१२ बुँदे समझदारी गर्दा भारतको हात थियो कि थिएन ?
यो गलत कुरा हो । म यो कुरामा शतप्रतिशत सहमत छैन । नेपालको आन्तरिक मामला नेपालीहरु आँफै हल गर्न सक्षम छन् ।
तर पछिल्लो समय तपाईले पनि भारतको विरोध गर्नुभयो नि ?
नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षको बोलेका हुँ । भारतको विरोध गरेको होईन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा भारतसँग गरेको सम्झौताको त खुलेरै विरोध गर्नुभएको थियो नि ?
हो, उहाँले त्यतिवेला राष्ट्रिय हितमा केही कमजोरी गर्नुभएकै हो । त्यो कुरा मैले औंल्याएकै हो । नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु ।
जाँदाजाँदै नेपालको राजनीतिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कत्तिको सफल हुनुहुन्छ ? उहाँप्रति यहाँको के धारणा छ ?
होइन, उहाँले दिन काट्ने काम गरिरहनुभएको छ । उहाँले समस्याको समाधान चाहेरपनि गर्न सक्नुहुन्न । त्यो परिस्थिति छैन ।
भनेपछि उहाँले संविधान संशोधन पनि गर्नसक्नुहुन्न ?
अहिले गाह«ो छ । म होस भन्ने कामना गर्दछु तर अहिले मैले त्यो सम्भावना देखेको छैन् ।